Monday March 11, 2019 - 18:17:22 in Wararka by Super Admin
Qorista curis Akaadeemiyeedku waa farshaxan uu qof walbaa barto si uu u soo saaro curis xambaarsan Macnaha waxa uu wax ka qoray, ka dib marka aad baratid asaaska qorista curisyada waa in curiskaagu yeeshaa Qeex xogeed qoran oo kaaashaneysa caddaymaha la xiriira waxa aad qorayso haba ka timaadee ila kale ama baaristaada Gaarka ahe.
Baadhitaanada badankooda waxaa haga oo dhabaha ku toosiya Hanaan loo dejiyey, xusuuso qaar ka mida xeerarka uu leeyahay qorista curis akaadeemigu (Academic Essay) taas ayaana kuu sahleysa inaad qorto waraaqo wax wax dhiirigeliya oo macna Togan leh, xattaa hadaad ku qortay Muddo Gaaban.
1. Samay Tusmadaada.
(Make your Outline)
Inta aadan bilaabin qorista curiskaaga waxaa muhiim ah inaad tiraahdo, Qaabka ugu fudud ee loo koobi karo curiska (essay) loona abuuri karo Dood sax ah waa in la sameeyo Tusmada Asaasiga ah (Basic Outline).
Qaabka asaasiga ah ee curis akaadeemigu wuxuu kulansanayaa walxaha ay ka midyihiin Hordhaca (Introduction), taas oo ah mid curiska ka mid ah, sidoo kale Jidhka curiska (essay Body) oo ah xidhmooyin kala duwan oo hawraaro ah kana faalloonaya cadaymaha taageeraya curiskaaga iyo Gebagenbaynta (conclusion) oo ah walax si wadajir ah iskugu xiraysa isla markaana xiriirineysa curiskaaga.
Hadaba intee cadaymood ayaa curiska lagu muujinayaa? Qoraha wanaagsani waa inuu curiskiisa ku daraa ugu yaraan saddex Qodob oo adag (solid points) taasoo si toosa u saacideysa curiskiisa.
2. Hel Fahamka Adag ee Asaaska u Ah Naxwaha, Qaabka iyo Qurxinta Qormada.
(Acquire a Solid Understanding Of Basic Grammer, Style and Puntuation)
Naxwaha, qaabaynta iyo Qurxintuba aad bay muhiim u yihiin hadaad rabto in baadhistaadu ay noqoto mid la fahmo oo aad loo xiiseeyo, hadaba intaadan bilaabin qoraalkaaga hubi inaad leedahay faham adag oo asaaska naxwaha ah.
Asaaska naxwaha waxaa kamida falka(verb) iyo falaha (subject) oo lays waafajiyo, adegsiga Artikal (article)iyo magac u yaal sax ah (proper pronoun) iyo dhisidda qaabiyadda hawraarta (sentence) oo la toosiyo, adigoo hubinaya qaabka saxda ah ee loo isticmaalo Hakadka, maskaxdan ku haya adeegsiga joogsiga (comma) marka loo baahdo.
Markaad qorayso curis akaadeemiya badanaa isticmaal fal-jooga halkaad ka isticmaali lahayd fal-tegey, (e.g. dheh "Daraasadani wexey soo saartay" halkaad ka oran lahayd Daraasadan ayaa soo saartay), tani curiskaaga ayey ka dhigeysaa mid cilmi ahaan culays badan.
Hubi in luuqadaadu tahay mid dhafan oo hadana gaaban, iska ilaali ereyada ku meelgaarka ah ee aan wax macna ah ku kordhinayn oraahdaada iyo ereyada badan ee xayiri kara doodaada.
3. Adeegso Ereyo Ku Haboon.
(Use The Right Vacabulary)
Ku dhiiro inaad ogaato macnaha saxda ah ee ereyada aad isticmaalayso leeyihiin, sida aad luuqada u adeegsataana waa muhiim weliba marka uu curiskaagu yahay mid Akaadeemiya.
Ogow inaad Dadka u sheegeyso inaad tahay tahay khabiir xariif ku ah samaynta dood maskaxeed suuban, isticmaal ereyo waaweyn si aad si quruxsan uga falceliso saamayn kasta oo ka soo horjeeda natiijadaada.
Wey fududahay cilad timaada markii qoraakaagu noqdo mid dhaafsiisan (overcompensating) curiskaaga, haddii aadan hubin saxnaanta ereyada aad isticmaashay waxaad khatar ugu jirtaa inaad si khaldan u adeegsato, sidoo kale isticmaalka luuqad madmadow kaaga jiro waxay meesha ka saartaa caddaynta doodaada, sidaa awgeed waa inaad tixgeliso luuqadda iyo ereyga si aad u bedesho kelmedda duweysa ama leexineysa ujeedkaaga saxda ah.
4. Fahan Dooda, Caddayntana u Lafagur Si Xeeldheer.
(Understand the argument and critically analyze evidence)
Habka loo qorayo curis akaadeemiga markasta waa inaad maanka ku haysaa doodaada, haddii kale waad ku jaahwareeri doontaa Afmeeridda iyo kala dhigdhigista wixii la xiisaynayey ee cinwaankaaga ku xusnaa, waxayna ku dhaxalsiineysaa in qoraalkaagu noqdo mid naaqus ah.
Badanaa isweydii in cadayn kasta oo qoraalkaaga ku jirtaa ay tahay mid kaabeysa curiskaaga, haddii jawaabtu noqoto "MAYA" markaa waa inaad iska saartaa caddayntaa, markaad qiimaynayso cadaymaha waa inaad adeegsato baadhista ugu adag si aad meel adag ugu tiiriso curiskaaga, xogkasta oo aad kusoo dartaana waa iney noqotaa mid si toosa ugu xidhan cinwaankaaga iyo Doodaaada.
5. Sidee Loo Qoraa Gebageba saxan oo Kaalmayneysa Baadhistaada.
(How to write a proper conclusion that supports your research)
Mid ka mida meelaha aadka looga eego curiska akaadeemiga waa gebagebada, gebagebadu waa waxa isku xiraya dhamaan cilmi baaristaada si loo hubiyo curiskaaga, mana aha inaad dib u xusto hordhacaagii ama nuqul(copy and past ) kasoo qaado curiskaaga laftiisa.
Gebagebada saxda ahi waa tan tusaalaysa furaha caddaymaha aad ku falanqaysay gudaha curiskaaga toosna ugu xidhan, si ay u tusiso sida ay cadaymuhu isu raacsanyihiin ama isu diidanyihiin, marka loo eego nuurka dooda ee baadhis cilmiyeedka.
Waxaa jira tira badan oo curisyo ah kuwaas oo gebagebadooda lagu qoray erayo diciifiyey qasadkii qoraaga ama u jeedkiisa, Haka yeelin curiskaaga mid kuwaa ka mid noqda.